MAK 10 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAK 10)
Emesịa, Jisọs sitere Kapanọm pụọ gaa nꞌakụkụ Judia, ebe dị nꞌakụkụ ọwụwa anyanwụ osimiri Jọdan. Ọ bụladị nꞌebe a, igwe mmadụ bịakwutere ya. Dị ka o si emekwa ebe ọ bụla ọ gara, Jisọs ziri ha ihe.
Ụfọdụ dị Farisii bịara nꞌebe ọ nọ na-ezi ndị mmadụ ihe jụọ ya sị, “O ziri ezi ka nwoke gbaara nwụnye ya achọkwaghị m?” Ha jụrụ ya ajụjụ a nꞌihi na ha chọrọ ka ha site nꞌihe ọ ga-ekwu jide ya.
Ma Jisọs jụrụ ha sị, “Gịnị ka Mosisi kwuru nꞌiwu ya banyere ịgba achọghị m?”
Ha zara sị ya, “Mosisi kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ achọkwaghị m nye nwụnye ya, ma ọ bụrụ na ọ chọkwaghị ịlụ ya ọzọ.”
Jisọs jụrụ ha sị, “Ùnu maara ihe mere Mosisi jiri nye unu iwu dị otu ahụ? Ọ bụ nꞌihi na unu bụ ndị afọ tara mmiri.
Na mbụ, mgbe Chineke kere nwoke na nwanyị, o sighị otu a dịrị. Chineke mere nwoke na nwanyị ka e jikọtaa ha nꞌotu, ka ha abụọ bụrụ otu nꞌọlụlụ di na nwụnye.
Nꞌihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, ka e jikọtaa ya na nwụnye ya.
Ha abụọ ga-abụkwa otu anụ ahụ. Mgbe ahụ ha agaghị abụkwa mmadụ abụọ, kama ha ga-abụ otu.
Ya mere, ihe ọ bụla Chineke jikọtara, ka mmadụ ọ bụla hapụ ịtọsa ya.”
Mgbe Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya batara nꞌụlọ, ha jụrụ ya ka ọ kọwaara ha ihe o kwuru banyere nkewa nke di na nwụnye.
Nwanyị ọ bụla kwa, kewapụrụ onwe ya site nꞌebe di ya nọ lụọ nwoke ọzọ na-emekwa mmehie ịkwa iko.”
Otu ụbọchị, ụfọdụ ụmụ nwanyị kuuru ụmụ ha na-abịakwute Jisọs ka o metụ ha aka gọzie ha. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ha, ha chụpụrụ ụmụ nwanyị ndị a, gwa ha na o kwesịghị ka ha nye Jisọs nsogbu.
Ma mgbe Jisọs hụrụ ihe a ndị na-eso ụzọ ya mere, o wutere mmụọ ya. Ọ baara ha mba sị, “Hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m. Unu egbochikwala ha. Nꞌihi na alaeze Chineke dịịrị ndị dị otu a.
Eziokwu ka m na-agwa unu, onye ọ bụla na-anabataghị alaeze Chineke dị ka ụmụaka ga-esi nabata ya, agaghị abanye nꞌime ya.”
Mgbe ahụ Jisọs kuuru ụmụntakịrị ahụ nꞌaka ya. O bikwasịrị ha aka nꞌisi, gọzie ha.
Mgbe Jisọs sitere nꞌebe ahụ na-apụ, otu nwoke gbaara ọsọ bịa gbuo ikpere nꞌihu ya. Ọ jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Ezi onye ozizi ọma, gịnị ka m ga-eme ka m nwee ike iketa ndụ ebighị ebi?”
Jisọs jụrụ ya, “Gịnị mere i ji na-akpọ m ezi mmadụ? Ọ dịghị onye ọ bụla bụ ezi mmadụ ma ọ bụghị nanị Chineke.
Ma banyere ajụjụ ị jụrụ m, ị maara ihe banyere iwu ndị a nke na-asị, egbula mmadụ, akwala iko, agbala ama ụgha, aghọgbula mmadụ ibe gị, sọpụrụ nna gị na nne gị?”
Nwoke ahụ zara sị ya, “Ee, Onye ozizi, amaara m ihe banyere ha. Edebezuchaala m ha nile siterị na mgbe m bụ nwanta.”
Jisọs lere nwoke ahụ anya, hụ ya nꞌanya. Mgbe ahụ ọ gwara nwoke ahụ sị, “Ọ fọdụrụ nanị otu ihe ị ga-eme. Laa ugbu a, ree ihe nile i nwere, nyekwa ndị ogbenye ego i retara. I mesịa nke a, ị ga-enwe akụ nꞌeluigwe. Mgbe ahụ bịaghachi soro m.”
Mgbe ahụ Jisọs legharịrị anya gwa ndị na-eso ụzọ ya okwu sị, “Lee ka o siri bụrụ ihe rara ahụ na onye ọgaranya ga-abanye nꞌalaeze Chineke.”
Nꞌezie ọ dịịrị inyinya mfe isite nꞌanya agịga gafee, karịa onye ọgaranya ịbanya nꞌalaeze Chineke!”
Okwu a Jisọs kwuru ugbo abụọ juru ndị na-eso ụzọ ya anya karịa. Ha sịrịtara onwe ha, “Ọ bụrụ na ọ ga-arara ndị ọgaranya ahụ ịbanye, onye kwanụ ka a ga-azọpụta?”
Ma Jisọs lere ha anya sị ha, “Ọ bụrụ na anyị jiri anya mmadụ lee ya, ọ bụ ihe rara ahụ. Ma nꞌebe Chineke nọ, ihe nile dị mfe. Ọ dịghị ihe rara Chineke ahụ ime.”
Pita zara ya sị, “Ugbu a anyị ahapụla ihe nile soro gị!”
Jisọs zara ya sị, “Ana m agwa gị eziokwu, ọ dịghị onye ọ bụla hapụrụ ụlọ ya, ụmụnne ya nwoke, ụmụnne ya nwanyị, nne ya, nna ya, ụmụ ya, na ala ubi ya nꞌihi m, na nꞌihi ozi ọma a,
nke na-agaghị anataghachikwa nꞌụwa a, ụlọ, ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, ndị nne, ụmụaka na ala ubi, tinyere mkpagbu, ihe ruru okpukpu narị karịa nke ọ hapụrụ. Ọ ga-anatakwa ndụ ebighị ebi nꞌụwa ọzọ.
Ma ọtụtụ ndị bu ụzọ ga-abụ ndị ikpeazu, ndị ikpeazụ ga-abụkwa ndị bu ụzọ.”
Ọ gwara ha sị, “Ugbu a anyị na-aga Jerusalem. Nꞌebe ahụ ka a ga-arara mụ, bụ Nwa nke mmadụ, nye nꞌaka ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu. Ha ga-ama m ikpe ọnwụ, nyefee m nꞌaka ndị mba ọzọ ka ha gbuo m.
Ndị a ga-enyefe m nꞌaka ha, ga-eji m mee ihe ọchị. Ha ga-agbụ m asụ, pịakwa m ihe. Emesịa ha ga-egbukwa m. Ma mgbe ụbọchị atọ gasịrị, aga m esite nꞌọnwụ bilie.”
Mgbe ahụ, Jemes na Jọn ụmụ Zebedi bịakwutere Jisọs. Ha sịrị ya, “Onye ozizi, ọ dị otu ihe anyị chọrọ ka i meere anyị.”
Jisọs zara sị ha, “Gịnị ka ọ bụ? Kwuonụ ka m nụ.”
Ha zara sị ya, “Nꞌoge ahụ, mgbe ị ga-abụ eze, nọkwasị nꞌocheeze gị, anyị chọrọ ịnọdụ nꞌakụkụ gị, otu onye nꞌime anyị nꞌoche dị nꞌakụkụ aka nri gị, onye ọzọ, nꞌoche dị nꞌaka ekpe gị.”
Ha zara sị ya, “Ee, Onyenwe anyị, anyị pụrụ ime ihe ndị a nile.” Ma Jisọs zara sị ha, “Nꞌezie, unu ga-enwe ike ṅụọ site nꞌiko ahụ, nke m ga-aṅụ, unu ga-enwekwa ike hụọ ụdị ahụhụ nke m na-aga ịhụ.
Ma ọ bụghị m ka ọ dịrị ikwu onye ga-anọ nꞌaka nri m, ma ọ bụ nꞌaka ekpe m. Chineke ekpebielarị ndị ga-anọ nꞌebe ndị a.”
Mgbe ndị na-eso ụzọ iri ahụ fọdụrụ nụrụ ihe Jemes na Jọn na-arịọ Jisọs ka o meere ha, iwe were ha nke ukwuu megide ụmụnne abụọ ahụ.
Ma Jisọs kpọkọtara ha nile sị ha, “Dị ka unu onwe unu maara, ndị eze ụwa a, na ndị a maara aha ha, na-eji aka ike achị ndị nọ nꞌokpuru ha.
Ma nꞌetiti onwe unu ọ gaghị esi otu a dịrị. Kama ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ịbụ onye ukwu, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ onye na-ejere unu ozi.
Onye ọ bụla kwa chọrọ ịbụ onye dị ukwuu karịa unu nile, kwesịrị ịbụ onye na-ejere onye ọ bụla nꞌime unu ozi.
Nꞌihi na mụ onwe m, Nwa nke mmadụ, abịaghị nꞌụwa ka ndị mmadụ jeere m ozi. Kama abịara m ijere ndị mmadụ ozi, na inye ndụ m ka ọ bụrụ ihe a ga-eji gbapụta ọtụtụ mmadụ.”
Mgbe ahụ ha ruru Jeriko. Mgbe ha nọtụsịrị nꞌebe ahụ, Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya, na ọtụtụ igwe mmadụ bidoro isite nꞌobodo ahụ pụọ. Ma o nwere otu nwoke kpuru ìsì aha ya bụ Batimiọs, nke pụtara nwa Timiọs, onye nọ nꞌakụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ.
Mgbe Batimiọs nụrụ na ọ bụ Jisọs onye Nazaret na-agafe, o bidoro iti mkpu na-asị, “Jisọs nwa Devidi, meere m ebere!”
Ọtụtụ mmadụ baara ya mba sị ya, “Mechie ọnụ gị!” Ma Batimiọs nọgidere na-eti mkpu na-asị, “Nwa Devidi, meere m ebere!”
Jisọs kwụsịrị gwa ndị mmadụ okwu sị, “Kpọọnụ ya!” Ha kpọrọ onye ìsì ahụ sị, “Enyi, taa bụrụ gị ụbọchị ọma. Bilie ọtọ, ọ na-akpọ gị!”
Batimiọs tụpụrụ akwa ochie ya nꞌotu akụkụ, wulie elu bịakwute Jisọs.
Jisọs jụrụ ya sị, “Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?” Batimiọs zara sị, “Onye ozizi, arịọ m gị, achọrọ m ịhụ ụzọ!”
“Laa!” Ka Jisọs gwara ya, “Okwukwe gị agwọọla gị!” Nꞌotu oge ahụ Batimiọs bidoro ịhụ ụzọ, soro Jisọs na-agbada ụzọ ahụ.